Ah Boy နဲ့ သူမရဲ့ ပထမဆုံးဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကို ဖွင့်ထုတ်ပြလာတဲ့ မြတ်ရတနာကျော် - Cele Connections
Ah Boy နဲ့ သူမရဲ့ ပထမဆုံးဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းကို ဖွင့်ထုတ်ပြလာတဲ့ မြတ်ရတနာကျော်
bilie | 27/04/2020 | Celebrity | No Comments
အဆိုတော် Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ကတော့ အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိပေမယ့် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို တည်ဆောက်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ရဲ့ မိသားစုလေးကို ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်ခင်စွာနဲ့ အားပေးကြပြီး သူတို့မိသားစုအကြောင်းလေးကို ဂရုတစိုက်ရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မြတ်ရတနာကျော်က သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဖူးစာဆုံခဲ့ကြပုံကို ပြောပြလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“သင်တို့ရော ဖူးစာရှင်နဲ့ တွေ့ပြီးပြီလား❤️ ? ဖူးစာရှင်အစစ်နဲ့ ပထမဆုံး message က ဘာတဲ့လဲ ❤️? တင်စရာ ပုံ တွေ မရှိတော့လို့ Ko Ah Boy လာကြူစဉ် အခါ က စာလေးတွေ ပြန်လည် ရှာဖွေ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ယော်ဘော ဆားရားငဲရော်နော် ❤️ ချာဂီးရားရဲ့ အိုပါးတွေကိုလည်း ချစ်ပေးရမယ်နော် ယော်ဘော” ဆိုပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေးထားပါတယ်။
Ah Boy ကတော့ မြတ်ရတနာကျော်ကို လွှမ်းပိုင်ရဲ့ တစ်ခါကတက္ကသိုလ် သီချင်း MV ကနေ သတိထားပြီး သဘောကျမိသွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း မြတ်ရတနာကျော်ရဲ့ စကားကို နားထောင်ပြီး အခုချိန်ထိတိုင် အလိုလိုက်လွန်းတဲ့ Ah Boy ကတော့ တကယ့်ကို ချစ်တတ်သူကြီးတစ်ယောက်ပါပဲနော်။
Source: Myat Yadanar Kyaw’s fb
Ah Boy နဲ့ သူမရဲ့ ပထမဆုံးဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးအကွောငျးကို ဖှငျ့ထုတျပွလာတဲ့ မွတျရတနာကြျော
အဆိုတျော Ah Boy နဲ့ မွတျရတနာကြျောတို့ကတော့ အသကျအရှယျကှာခွားမှုရှိပမေယျ့ နားလညျမှုအပွညျ့နဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ လှမျးခွုံနတေဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို တညျဆောကျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။ Ah Boy နဲ့ မွတျရတနာကြျောတို့ရဲ့ မိသားစုလေးကို ပရိသတျတှကေလညျး ခဈြခငျစှာနဲ့ အားပေးကွပွီး သူတို့မိသားစုအကွောငျးလေးကို ဂရုတစိုကျရှိကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ မွတျရတနာကြျောက သူမတို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျ ဖူးစာဆုံခဲ့ကွပုံကို ပွောပွလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
“သငျတို့ရော ဖူးစာရှငျနဲ့ တှပွေီ့းပွီလား❤️ ? ဖူးစာရှငျအစဈနဲ့ ပထမဆုံး message က ဘာတဲ့လဲ ❤️? တငျစရာ ပုံ တှေ မရှိတော့လို့ Ko Ah Boy လာကွူစဉျ အခါ က စာလေးတှေ ပွနျလညျ ရှာဖှေ တငျဆကျလိုကျပါတယျ။ ယျောဘော ဆားရားငဲရျောနျော ❤️ ခြာဂီးရားရဲ့ အိုပါးတှကေိုလညျး ခဈြပေးရမယျနျော ယျောဘော” ဆိုပွီး သူမတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝပေေးထားပါတယျ။
Ah Boy ကတော့ မွတျရတနာကြျောကို လှမျးပိုငျရဲ့ တဈခါကတက်ကသိုလျ သီခငျြး MV ကနေ သတိထားပွီး သဘောကမြိသှားတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ ခဈြသူတှဖွေဈပွီးနောကျပိုငျးမှာလညျး မွတျရတနာကြျောရဲ့ စကားကို နားထောငျပွီး အခုခြိနျထိတိုငျ အလိုလိုကျလှနျးတဲ့ Ah Boy ကတော့ တကယျ့ကို ခဈြတတျသူကွီးတဈယောကျပါပဲနျော။
လူ့ဘဝရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံအချိန်တွေကုန်သွားခဲ့တဲ့ အသက်(၂၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သိလိုက်ရတဲ့ ဘဝအသိတစ်ခုကို ဝေမျှလာတဲ့ ရွှေထူး
မိဘတွေနဲ့ အထင်အမြင်လွဲအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး မယောင်ရာဆီလူးသူတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင် ဒဲ့ပြောလာတဲ့ ဟိန်းမင်းသူ
“အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် Melody World ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်က ချွေးပျံအောင် ထိတ်လန့်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြလာတဲ့ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်”
မေမေကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းတွေကို အားရပါးရစားနေတဲ့ သားလေးကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းသမျှ အမောပြေနေရတဲ့ ဆုပန်ထွာ